नेपालीहरु झुटो बोल्छन् ? - Aarsha Khabar
नेपालीहरु झुटो बोल्छन् ?
आर्ष खबर देश
by Aarsha Khabar २४ चैत्र २०७६, सोमबार
युवान च्वाङ्गको यात्रा वृत्तान्तमा नेपालको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस पुस्तकलाई स्यामुयल बीलद्वारा अंग्रेजी भाषामा अनूवादित गरिएको छ । चिनियाँ यात्री च्वाङ्गले अंशुवर्मा भर्खर भर्खर लिच्छवि कालको राजा भएको बखत नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भ्रमण पश्चात नेपालको वर्णन गर्ने शिलशिलामा खेती, प्रकृति र कलाको सुन्दर बर्णन गरेका छन् । नेपाली चालचलनबाट भने चिनियाँ यात्री सन्तुष्ट हुन सकेको पाईंदैन । नेपालीहरु झुटो बोल्छन् । नेपालीहरुको चालचलन झुटो बोल्ने र पत्यार गर्न नसकिने छ । यहाँका मानिसहरुका स्वभाव उज्जण्ड छ । तिनीहरु सत्यको वास्ता गर्दैनन् र मान्नु पर्नेलाई मान्दा पनि मान्दैनन् । तिनीहरु अनपढ भए तापनि कालिगढी काममा भने सिपालु छन् । तिनीहरुको अनुहार नराम्रो र डरलाग्दो छ भनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
नेपाली माटोमा धेरै पसिना र रगत बगिसकेको छ । पानीको त कुरै नगरौं प्रशस्त बगिसक्यो । १५ सय वर्ष अगाडि चिनियाँ यात्रीले देखेको खेती, प्रकृति र कलालाई खास रुपमा आजसम्म आइपुग्दा जोगाउन सकेको देखिदैन । खाद्यन्न, मल, बिउबिजनमा परजीवी बन्न पुगेका छौं । प्रकृतिमा भएका अथाह स्रोतलाई चिन्न छोडिसकेका छौं । कला देखासिकी बनाइ पोली खाइहाल्यौं । यस्तो परिस्थितिमा विश्व जगतलाई ठोस रुपमा देखाउने कुरा के हो ? भन्ने कुरा के हो ? गम्भीर परीक्षाको घडिमा नेपाल राष्ट्र उभिएको छ । लिच्छविकाललाई स्वर्णकालको रुपमा चिनिन्छ । मल्लकालमा लुन्तभद्र बज्राचार्यद्वारा तयार गरिएको नारद संहितामा आधारित मानवन्यायशास्त्र जयस्थिति मल्लले कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । यो कार्यान्वयन पश्चात मान्छेले मान्छेलाई हेर्ने स्वभावमा परिवर्तन आयो । बिस्तारै समाज बिभाजनमा फस्यो । मानिसहरुको चालचलन चिनियाँ यात्रीले भने भन्दा फरक हुन सकेन । वि.स १९१० मा जंगबहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐनले समाजलाई वर्गिय रुपमा पनि बिभाजन गर्न सफल भयो । यसकै श्रृंखला यो वा त्यो तरिकाले आजसम्म चलिरहेको भान नेपाली समाजमा पर्न थालेको छ ।
नेपालमा विभिन्न समयमा राजनैतिक क्रान्ति सफल भए । व्यवस्था हेरफेर भयो । आफ्नो कलाकौशल, परम्परागत उद्योगधन्दा, व्यापार, वाणिज्य अटुट रुपमा चलाइरहन भने कुनै व्यवस्थाले सकेन । यो परिदृश्यबाट नेपाली युवाहरु टिक्न नसकेर बिदेश पलायन भएका छन् । अथाह स्रोतको भण्डार हँुदा हँुदै पनि हामी नेपाली लोत्याङ्ग्रे भयौं । स्वभाव र चालचलनमा परिवर्तन हुन नसकेकै कारण पश्चिमी लेखक, यात्री र इतिहासकारले पनि नेपालीहरुलाई हेपेर अपमानजनक टिप्पणी आफ्नो साहित्यमा लेखेका छन् । पश्चिमा लेखकहरुको दृष्टिमा खसहरु असभ्य हुन, त्यस्तै नेवारहरु असभ्य र फोहोरी हुन । नेपाली महिला कुरुप हुन्छन, यिनीहरुलाई मानिस भन्नु भन्दा भूत भन्नु राम्रो हुन्छ । यसैगरी पश्चिमाहरुले सबै जनजातीहरुलाई कुनै न कुनै बिल्ला भिराइ दिएका छन । के साँच्चै बिदेशीहरुले भने जस्तै नेपालीहरुको चालचलन झुटो बोल्ने, पत्यार गर्न नसकिने र स्वभाव उज्जण्ड नै छ त ?
हाल नेपालमा बहुमतको सरकारले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न कस्सिएको सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पाटी नेकपाले इतिहासमा भएका भुलहरुलाई समीक्षा र संष्लेषण गर्दै अगाडि बढ्न सक्छ या सक्दैन ? आफुसँग भएको लाखौं कार्यकर्तालाई ठोस योजना सहित परिचालन गर्नमा सफल हुन्छ या हुँदैन ? नेपालीहरुसित भएको गौरवको इतिहासलाई एक पटक एकताबद्ध बनाउँदै सगरमाथा भैंm चुलाउन सक्छ या सक्दैन ? विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ भाइरसबाट नेपाललाई जोगाउन खेलिने सकारात्मक, रचनात्मक कदमले नेपालीहरुको स्वभावको पनि परिचय दिन्छ । संकटको बेलामा ढुक्कले अभिभावकको भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ । मानव जाती माथि कै यो संकटबाट नेपालीलाई सुरक्षित तवरले अवतरण गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुनेछ । इतिहासदेखि खेप्दै आएको आरोप पखाल्ने अवसर यति बेला आएको छ । सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक यो अवसरबाट चुके पुष्टि हुन्छ कि नेपालीहरु सुध्रेका छैनन् झुटो नै बोल्छन् । सत्यको वास्ता गर्दैनन् ।
अष्ट्रेलियामा ६० हजार नेपाली विद्यार्थी संकटमा
बैशाख ३ गतेसम्म लक डाउन, गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकरी नियुक्त
Aarsha Khabar April 26, 2019
भारतले नेपालबाट आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश लग्यो
Aarsha Khabar June 4, 2020
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको विषयमा विवाद
Aarsha Khabar July 28, 2019